Home DUGSIYADA NORTH AMERICAN SOCCER Sheekada Carruurnimada Giovanni Reyna Plus Xaqiiqda Untold Biography
Sheekada Carruurnimada Giovanni Reyna Plus Xaqiiqda Untold Biography. Dhibcaha: ST iyo UEFA
Haa !, waxaa loogu naaneysaa “Captain America". Maqaalkayagu wuxuu ku siinayaa dabool buuxa oo ah Taariikhda Caruurnimada Giovanni Reyna, Bayoolajiga, Xaqiiqda Qoyska, Waalidka, Nolosha Hore, Nolosha nololeed, Nolosha shaqsiyeed iyo dhacdooyinka kale ee xuska ah laga soo bilaabo markuu ilmuhu ahaa ilaa markii uu caan noqday.
Nolosha iyo koritaanka Giovanni Reyna. Astaanta Sawirka: SI
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu yahay qadka dhexe ee gaarka ah ee leh rajo weyn. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgeliya noocayaga Giovanni Reyna's Biography kaas oo aad u xiiso badan. Hadda, iyada oo aan la sii amba qaadin, aynu bilowno.
Giovanni Reyna's Sheekada Carruurnimada:
Mid ka mid ah sawirradii caruurnimada ee hore ee loo yaqaannay Giovanni Reyna. Astaanta Sawirka: SI.
Bilaabidda, Giovanni Alejandro Reyna wuxuu ku dhashay maalintii 13aad ee November 2002 magaalada Sunderland ee England. Waa kan labaad ee afar carruur ah oo uu u dhashay hooyadiis Danielle Egan Reyna iyo aabihiis Claudio Reyna.
In kasta oo Giovanni ku dhashay Yurub, haddana waxaa caan ku ah muwaadin Mareykan ah sababta oo ah wuxuu ku qaatay qaybtii wanaagsanayd ee caruurnimadiisii ​​kuna soo barbaaray New York City isaga iyo walaalkiis ka weyn, Jack iyo walaashii ka yaraa - Joah iyo Carolina.
Sawirka Carruurnimada ee Giovanni (bidix bidix) kuna koray New York isaga iyo walaalihiis iyo walaasha. Astaanta Sawirka: SI.
Markii uu ku soo koray New York, Giovanni wuxuu ahaa ciyaartooy dabiici ah oo dabeecad xamaasad leh oo leh waxa ay ku qaadan karto inay ku guuleysato nooc kasta oo track ah iyo dhacdo garoonka ah. Xaqiiqdii, wuxuu lahaa danaha hore ee golf wuxuuna ku ciyaari karaa kubbadda koleyga ka hor inta uusan gaarin 5 sano.
Markii uu Giovanni ugu dambeyntii 5 jirsaday, wuxuu bilaabay kubbadda cagta kubbadda-ku-cayaaridda inuu ku farxo waalidkiis oo aad ugu faraxsanaa in wiilkooda labaad uu muujiyo xiisaha kubbadda cagta una qaato mid ka mid ah cayaaraha carruurtiisa.
Giovanni Reyna's Taariikhda Qoyska:
Haa, Giovanni aabihiis iyo hooyadiis ma aheyn kuwa faqiir ah laakiin farxada ay ku lahaayeen caruurnimadooda kubada cagta waxay cadeyn u aheyd madaama labada waalidba taariikh hodan ku leeyihiin ciyaarta isboortiga. Si ay ugu bilowdo hooyadeed Giovanni, waxay ahayd xirfadyahan hore oo kubada cagta ah xubin horena uga ahaa kooxda kubbadda cagta haweenka ee Mareykanka. Sawirka hoose waa sawir qurxoon oo waalidiinta Giovanni Reyna (Claudio iyo Danielle Egan).
La kulan waalidiinta Giovanni Reyna. Astaanta Sawirka: SI.
Dhiniciisa, aabihiis Giovanni wuxuu sidoo kale ahaa nin Mareykan ah oo taariikh u leh Glasgow Rangers, Manchester City iyo Sunderland halkaasoo wiilkiisii ​​labaad ku dhashay. Markaa, waxay ahayd wax caadi ah oo ay ku faraxsaneen xiisaha Giovanni in ay maraan wadooyinkooda si ay xirfad shaqo ugu dhisaan.
Giovanni Reyna's Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Markii wakhtigu saxnaa, qof dhalinyaro ah oo han weyn ayaa Giovanni wuxuu qayb ka noqday nidaamka akadeemiyada kooxda New York City (NYCFC) halkaas oo uu ka bilaabay dhisida mustaqbal wanaagsan xagga waxbarashada kubada cagta.
Wuxuu qayb ka noqday NYCFC isagoo da 'aad u yar. Dhibcaha Sawirka: NYCFC iyo SI.
Fahmitaanka rabitaankooda wiil ee kubad cagta si ay ugu noolaadaan, waalidiinta Giovanni Reyna (Claudio iyo Danielle Egan) waxay sameeyeen wax kasta oo ay karaan si ay u taageeraan himilooyinkiisa. Intii uu Giovanni baranaayay ganacsiga, wuxuu fiiro gaar ah siinayay tilmaamaha mana laga helin maqnaanshaha jirka iyo maskaxda. Xaqiiqdii, wuxuu ahaa nin caan ah oo kubada cagta ah kaasoo ogaa inuu mustaqbal ifaya ku leeyahay kubada cagta.
Giovanni Reyna's Sanadaha Hore ee Kubadda Cagta:
Sidaas oo kale, kor u qaadista Giovanni waxay ahayd mid deg deg ah oo ugu muhiimsan mudnaanta maxaa yeelay aabihiis - Claudio wuxuu ahaa agaasimaha isboortiga ee NYCFC laakiin uma uusan adeegsanin gacanta dheer ee saameynta inuu kor u qaado rabitaanka naftiisa ee da 'yarta.
Markaa, horumarka Giovanni wuxuu ahaa mid hufan oo mahadnaq u leh asxaabtiisa iyo tababarayaashii gaadhay go aanka ah inuu yahay dabiici leh rajooyin mustaqbal ka dhigaya inuu akadeemiga ku faani karo.
Mustaqbalka wanaagsan ee Giovanni ee isboortiga waxaa horay u arkay asxaabtiisa iyo tababarayaasha kooxda NYCFC. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Giovanni Reyna's Wadada loo maro Sheekada:
Xilliga ugu sarreya dadaallada isboorti ee Giovanni ee NYCFC, wuxuu si wanaagsan u qabtay inuu ka caawiyo kooxdiisu inay ku guuleysato Generation Adidas Cup bishii Abriil 2017, tartan uu u arkay in markaas 14 jirka ah uu sidoo kale u soo muuqday inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican.
Maxaa intaa ka badan? Giovanni wuxuu sii waday inuu ka caawiyo US U15s inay ku guuleystaan ​​tartanka dhalinyarada Torneo Delle Nazioni ee sharafta leh wuxuuna si fiican 2017/18 kula dhameystay NYCFC isagoo dhaliyay 13 gool 17 kulan oo uu saftay.
Miyaad ka dhex arki kartaa kooxdii qurxinta? Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Taariikh nololeedka Giovanni Reyna- Sheekooyinka Rise To Fame
Bandhigyadan oo kale oo cajiib ah, la yaab malahan in Borussia Dortmund aysan waqti u luminin sugida adeegyada qadka dhexe. Markii hore waxaa loo sameeyay inuu u ciyaaro kooxda reer Jarmal ee U19s xilli ciyaareedkii 2019/20 ka hor inta uusan ku dallacsiin heerka koowaad ee kooxda intii lagu jiray fasaxii qaboobaha.
Markii ugu horreysay ee uu u saftay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Bundesligaha kooxda Borussia Dortmund, waxaa duubista loo duubay ka dib markii uu duubnaa Giovanni kaasoo xanaaqsan Christian Pulisic adoo noqday kan ugu da’da yar ee Mareykan ah ee waligiis kasoo muuqday Bundesliga.
Ma ogtahay in Giovanni uu sidoo kale noqday gooldhaliyaha ugu da’da yar taariikhda Jarmalka markii uu shabaqa soo taabtay kulankii ay guuldarro 2-3 ka soo gaartay Werder Bremen intii lagu jiray Wareega 16aad ee DFB-Pokal.
Mar labaad oo keliya 15 maalmood ka dib, Giovanni wuxuu noqday kii ugu yaraa ee Mareykan ah ee ciyaaro isla markaana caawiye ka noqda Champions League markii uu aasaasay. Erling Håland's Goolka guusha ee ciyaarta si ay uga caawiso kooxda Borussia Dortmund inay guul 2-1 ah ka gaarto kooxda PSG. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Eeg cidda siisay Erling Håland caawintaas oo ka dhigtay Dortmund inay guuleysato. Sawirka Sawirka: Hadafka.
Giovanni Reyna's Gabadh?
Taageerayaasha iyo saxaafada kuma faraxsana in Giovanni kaliya uu war ka dhigo qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ee kubada cagta iyo rikoorka rikoorka. Sidaas oo kale, waxay si aad ah u doonayaan inay wax ka ogaadaan saaxiibtiisa ama ay hubiyaan haddii uu qabo naag qarsoodi ah.
Nasiib darrose, rabitaanada noocan ahi way sii socon doonaan iyada oo Giovanni uu jiro 17 sano oo keliya waqtiga qorista taariikh nololeedkan oo aan lahayn wiil / gab / gab toona guurka.
Dhallinyar, guuleyste oo qurxoon Giovanni waa kalyo sida bishii Febraayo 2020. Astaanta Muuqaalka: SI iyo LB.
Shaki iigama jiro in qadka dhexe uusan tixgelin siin doonin saaxiibtinimada ama afadiisa mudnaanta koowaad. Arintaan ayaa imaaneysa xilli lagu wado inuu xoojiyo booskiisa kooxda koowaad ee Borussia Dortmund. Waxaa taas kasii daran, oo magiciisa ku marmarsiyoonaya garsoorayaasha da 'yarta ah ee kubada cagta si ay u daawadaan tobanka sano ee soo socota ee ciyaaraha heerka sare.
Giovanni Reyna's Nolosha Qoyska:
Waa wax aan la qiyaasi karin inay run tahay in qoyska ku jira isboortiga ay wada joogi doonaan. Qeybtaan, waxaan kuugu soo qaadan doonaa xaqiiqooyin ku saabsan xubnaha qoyska Giovanni ee ka bilaabanaya waalidkiis.
Barashada Nolosha Qoyska ee Giovanni Reyna Astaanta Muuqaalka: Instagram
Wax dheeraad ah oo ku saabsan Aabaha Giovanni Reyna:
Claudio Reyna waa aabaha qadka dhexe. Ku xukumaya magaciisa, waxaad si fudud u malayn kartaa inuu leeyahay xidid qoys oo aan Ingiriis ahayn. Runtu waa, Giovanni Reyna aabihiisa “ClaudioWuxuu leeyahay asal ahaan qoysaska reer Argentine iyo Boortaqiiska. Sida khubarada hore waxay u dhaqmi jireen, Claudio wuxuu door firfircoon ka ciyaaray tababarkii dhalinyarada ee Giovanni wuxuuna door muhiim ah ka qaatay kor u qaadistiisa kubada cagta.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan Hooyo Giovanni Reyna:
Hooyooyinka isboortiga ee waaweyni waxay dhaliyeen wiilal isboorti oo hooyada Giovanni Reyna's kuma eka. Danielle Egan Reyna waa cayaaryahan howl gab ah oo Mareykan ah, kaasoo mar u soo ciyaaray kooxda haweenka kubada cagta ee Mareykanka sanadkii 1993. Hoos waxaa ku sawiran Giovanni (wiilkeeda), labaduba runtii waxay wadaagaan xiriir gaar ah.
Wax badan oo ku saabsan Giovanni Reyna hooyadeed, Danielle Egan. Dhibcaha: Instagram
Ku saabsan Walaalaha Giovanni Reyna iyo Qaraabada:
Khadka dhexe wuxuu leeyahay seddex walaalo ah oo uu la soo koray. Waxay ka mid yihiin walaalkiis ka weyn Jack iyo walaalaha ka yar - Joah iyo Carolina.
sida Giovanni, Jack wuxuu lahaa xiisaha hore ee kubbadda cagta iyo kubbadda Koleyga laakiin wuxuu ku dhacay kansarka carruurnimada kaasoo keenay dhimashadiisa aan caadiga aheyn markii uu ahaa 13 sano jir. Ka hadal walaalaha qadka dhexe ee haray, walaalkiis ka yar Joah wuxuu xiiseynayaa cunno karinta iyo kubbadda cagta halka gabadha kaliya ee qoyska - Carolina ay gasho dhowr isboorti waqtiga qorista taariikhda Giovanni Reyna.
Sawirka qadka dhexe oo leh hooyadiis, aabihiis iyo walaalihiis. Astaanta Sawirka: SI.
Giovanni Reyna's Nolosha Qofka:
U guuritaanka nolosha Giovanni nolosha ka fog kubada cagta, wuxuu leeyahay shaqsiyad hodan ah oo ka turjumaya hamiga, dareenka, himilada iyo tayada wanaagsan ee shaqsiyaadka calaamada zodiac ay ku leedahay Scorpio.
Xiddiga qadka dhexe oo si dhexdhexaad ah u caddeeya xaqiiqooyinka ku saabsan noloshiisa gaarka ah iyo shaqsiyadiisa, ayaa leh danaha iyo hiwaayadaha ay ka mid yihiin ciyaar golf, joogteynta cayaaraha kubbadda koleyga iyo waqti la qaadashada saaxiibadiisa iyo qoyskiisa.
Kani waa sawir naadir ah oo Giovanni ku ciyaaraya golf xilli firaaqe ah. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Giovanni Reyna's Hab-nololeedka:
Marka loo eego qaab nololeedka Giovanni, qiimahiisa saafiga ah ayaa wali dib loo eegayaa waqtiga qorista laakiin wuxuu leeyahay qiimo suuqeed ah 6 milyan oo euro. Qiimahaas oo kale, waxaa caddeyn u ah in ciyaaryahanka qadka dhexe uusan aheyn mid qaata mushahar weyn ama mid weyn.
Sidaa darteed, way adagtahay in la arko xiddigan qadka dhexe oo ku nool qaab nololeed raaxo leh asxaabtiisa kooxda oo wadooyinka Jarmalka kula socda baabuurta qalaad iyo guryo qaali ah. Si kastaba ha noqotee, wuxuu u lebisto labiska si uu uga qeyb galo munaasabado qaas ah oo asxaabti uu la wadaago.
Ma ahan markasta oo aad aragto khad dhexe oo labis labis qurux badan leh laakiin Giovanni wuu labisan yahay. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Giovanni Reyna's Xaqiiqooyinka:
Si aad u soo duubto sheekadeena carruurnimada Giovanni Reyna iyo taariikh nololeedkiisa, halkan waxaa laga helayaa xaqiiqooyin yar oo aan laga aqoonin ama aan ka warqabin oo ku saabsan isaga.
Xaqiiqada # 1 - Mushaharka Mushaharka:
Tan iyo markii uu ku soo batay goobta kubada cagta ee Dortmund, taageerayaal badan ayaa internet ka soo galay si ay u ogaadaan inta uu soo galo Giovanni Reyna. Runtu waa, twuxuu weerarayaa qandaraaska qadka dhexe ee BVB wuxuu u arkaa inuu jeebka ka qaadanayo mushaharka oo dhan € 600,000 sanadkiiba. Arinta ugu yaabka badan ee hoos ka muuqata waa mushaharka Giovanni Reyna ee jabsanaya sanadkii, bil, maalin, saacad, daqiiqad iyo ilbidhiqsiyo (sida waqtiga qoraalka).
Dakhliga Pound Sterling (£)
Dakhliga sanadkii € 600,000 £ 522,767.12 $ 669,501.00
Daqliga bishiiba € 50,000 £ 43,563.9 $ 55,791.75
Daqliga usbuucii € 12,500 £ 10,890.98 $ 13,947.9
Daqli maalintiiba € 1,785.7 £ 1,555.85 $ 1,992.56
Dakhliga halkii saac € 74.4 £ 64.83 $ 83.02
Daqliga daqiiqaddii € 1.24 £ 1.08 $ 1.38
Lacag-bixintii Halkii Sekan € 0.02 £ 0.018 $ 0.02
Tani waa inta Giovanni Reyna kasbatay tan iyo markii aad bilowday daawashada bogga.
Ma ogeyd?… Ninka celceliska ah ee Jarmalka wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo ugu yaraan 1.1 sano si loo kasbado € 50,000, taasoo ah lacagta uu Giovanni Reyna qaato bil gudaheed.
Xaqiiqada # 2 - Tattoos:
Way iska cadahay in Giovanni aanu lahayn farshaxan jidh ahaaneed waqtiga qorista. Wuxu jecelahay inuu maqaar jilicsan ku muujiyo dhererkiisa dhexdhexaadka ah ee 6 dhudhun iyo 1 inji.
Wuxuu hubiyaa inuu u muuqdo mid wanaagsan oo aan lahayn tattoos. Astaanta Muuqaalka: Instagram.
Xaqiiqada # 3 - Sigaar cabidda iyo cabbitaanka:
Giovanni sigaar ama cabitaan mas'uuliyad darro ah. Xirfad-yaqaan ahaan, ka warqabka baahida loo qabo in la caafimaad qabo oo marwalba fiiqan markasta danahiisa ugu fiican.
Xaqiiqada # 4 - Qiimaynta FIFA:
Giovanni ma leh qiimeyn guud oo heer sare ah FIFA ah oo ah 63 sida bishii Febraayo 2014. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax meesha laga saarayo xaqiiqda ah in qiimeyntiisu ay kor u kacday meteoric. Tani waa sababta oo ah wuxuu leeyahay kaliya bilo yar oo waayo-aragnimo ah ciyaarta kubbadda-sare ee waqtiga qorista.
Had iyo jeer waxaa jira bilow hooseeya. Sawirka Sawirka: SoFIFA.
Xaqiiqada # 5 - Diinta:
Xiddiga qadka dhexe kuma fiicna diinta waqtiga qorista. Sida saameyntiisa arrimaha iimaanka looma goyn karo gebi ahaanba. Si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay in waalidiinta Giovanni Reyna ay tahay inay isaga ku barbaariyaan inuu qaato diinta masiixiga.
Weydiimaha Giovanni Reyna Wiki:
Shaxdan hoose waxay ku siineysaa macluumaad deg deg ah oo gaaban oo kusaabsan Giovanni Reyna.
Xaqiiqooyinka Taariikh nololeedka Giovanni Reyna (Baadhitaanka Wiki)
Magaca buuxa: Giovanni Alejandro Reyna
naaneys; Captain America
Waaliddiinta: Danielle Egan Reyna (Hooyo) iyo Claudio Reyna (Aabe)
Walaalayaal: Jack Reyna (Late), Joah Reyna
Hooyo: Carolina Reyna
Asalka qoyska Asalka qoyska asal ahaan Mareykanka, Argentine iyo Boortaqiiska
Meesha uu ku koray: Bedford, New York.
Goobta Dhalashada: Sunderland, England.
Dhererka: 6 ft 1 ee (1.85 m)
Shaqada: Qadka dhexe ee weerarka
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhriskayaga Taariikhda Dhalashada Giovanni Reyna Plus Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Clint Dempsey Sheeko dhalasho sheeko xeel dheer
Jozy Altidore Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira
Taariikhda la beddelay: Abriil 24, 2020
Taariikhda la beddelay: Abriil 12, 2020